कानुनी जानकारहरु भन्छन्-'यौन दुर्व्यवहारमा पीडितले बोली फेरे पनि अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन' - Nepalese Timesकानुनी जानकारहरु भन्छन्-'यौन दुर्व्यवहारमा पीडितले बोली फेरे पनि अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन' - Nepalese Times
नेपालमा थप पाँचजना काेराेना संक्रमितकाे मृत्यु 15 घण्टा अघि
काेराेना संक्रमित कतै तरकारी त कतै पान बेच्दै ! 1 दिन अघि
काठमाडौंमा दश दिनमा ४५० कोरोना संक्रमित थपिए, नाकामा थप कडाइ आवश्यक 1 दिन अघि
मन्त्री यादवलाई कोरोना संक्रमण पुष्टी2दिन अघि
किसानकाे प्रश्न – ‘युरिया मल कहिले पाइन्छ ?’2दिन अघि
जब खल्तीबाट चक्कु निकालेर श्रीमानले श्रीमतिको नाक काटिदिए‍‍‍…2दिन अघि
आजदेखि जोरबिजोर नम्बरका आधारमा गाडी चल्ने, यस्ता छन् सरकारका अरु तयारी2दिन अघि
सांसद यादवसहित थप ६४ जनामा कोरोना पुष्टि 1 हप्ता अघि
नेप्लिज संवाददाता१५ आश्विन २०७६, बुधबार १२:०७ (10 महिना अघि) ४३५ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं, असोज १५ । सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको आरोपबारे पीडित भनिएकी महिलाले आफ्नो भनाइ फेरे पनि अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने फौजदारी कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।
फौजदारी कसुरको आरोपमा सूचना पाउने बित्तिकै प्रहरीले अनुसन्धान गर्नैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेकाले अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।
सङ्घीय संसद्‍ सचिवालयमा कार्यरत एकजना महिलाले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि महराले मङ्गलवार राजीनामा दिएका थिए। महराले आफूमाथि लागेको आरोपलाई निराधार भन्दै खण्डन गरिसकेका छन्।
मङ्गलवारै पीडित भनिएकी महिला आफैँले उक्त आरोपको खण्डन गरेको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि भने प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्छ वा बढ्दैन भन्दै धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।
फौजदारी कानुनका जानकारहरूका अनुसार पीडित भनिएकी महिलाले विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत्‌ महरामाथि लगाएको आरोपको आफैँले खण्डन गरेपनि प्रहरी अनुसन्धानबाट पछि हट्न मिल्दैन।
फौजदारी कानुनका एकजना जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्, “यो सामान्य अपराधको आरोप होइन, त्यसैले उजुरी आएन वा पीडित भनिएकी महिलाले बोली फेरिन् भन्दैमा अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन।”
उनी पीडित भनिएकी महिलाले आइतवार राति फोन गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेर केही प्रमाणहरू पनि सङ्कलन गरेको अवस्थामा अब “सर्लक्कै पन्छिन” नमिल्ने बताउँछन्।
उनले भने, “यो घटनामा पीडित भनिएको व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा र उनले जाहेरी दिँदा मुद्दा बलियो बन्छ। तर त्यसो भन्दैमा अनुसन्धानलाई किन पनि रोक्न मिल्दैन भने प्रहरीले आफैँले अनुसन्धान सुरु गरिसक्यो। पीडित भनिएको मानिसको घरमा पुगेर प्रमाण सङ्कलन गरिसक्यो।”
उनले कतिपयले मानसिक रोगको उपचार गराइरहेको व्यक्तिले लगाएको आरोप वा भनेको कुरा प्रमाण हुँदैन भन्ने गरेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, “त्यसो भए बोल्न नसक्ने, सुस्त मनस्थितिका व्यक्ति वा कान नसुन्ने र आखाँ नदेख्ने व्यक्तिले भनेको कुरालाई नपत्याउने? कानुनले त्यसलाई प्रमाण नमान्ने भनेको छैन।”
फौजदारी कानुनका अर्का एक जानकार अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल पनि अहिलेको अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धानलाई अघि बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको बताउँछन्।
उनले भने, “पीडित भनिएको व्यक्तिले आरोपको खण्डन गरे पनि वा नगरे पनि यसमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ। यस्ता कसुरमा अनुसन्धान बन्द गर्न वा मिलापत्र गराउन पाइँदैन।”
खरेलका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको कुरा पीडित भनिएको व्यक्तिको घरमा गएर त्यहाँका घरबेटीको रोहबरमा प्रमाण सङ्कलन गरेकाले देखिन्छ।
त्यस्तै महराले पनि अभियोग लागेको भनेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भन्दै राजीनामा दिएसकेको अवस्थामा अब प्रहरीले त्यसलाई कुनै तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याई नहुने उनले बताए।
खरेलका अनुसार अहिले पीडित भनिएकी महिलाले आफ्नो भनाइ फेरे पनि प्रहरीले प्ररम्भिक अनुसन्धान गर्नैपर्ने हुन्छ।
त्यसका लागि पीडित भनिएकी महिला र आरोप लागेका महराको बयान तत्कालै लिनुपर्ने उनले बताए।
‘सूचना नै उजुरी’
“पहिले प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कसूर प्रमाणित नहुने देखेमा मुद्दा चलाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको थिएन। अहिलेको फौजदारी संहिताले भने प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानबाटै कुनै वारदात नभएको प्रमाणित भए त्यसलाई प्रतिवेदन दिएर बन्द गर्नसक्छ,” उनले भने।
अहिले पीडित भनिएकी महिलाले आरोप खण्डन गरेको भनेजस्तै उक्त घटना नै नभएको प्रमाणित भएमा पनि त्यसलाई ठहर गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने खरेलले जानकारी दिए।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल पनि पीडित भनिएको व्यक्तिले आफ्नो भनाइ फेर्‍यो भनेर अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने बताउँछन्।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाण्डूका प्रवक्ता श्यामलाल ज्ञवालीका अनुसार प्रहरीले पीडित भनिएकी महिलाको डेरामा गएर प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको छ।
“प्रहरीले सूचना प्राप्त गर्ने बित्तिकै प्रमाणहरू अभिलेखन गर्ने काम गरेको छ। सूचनाकर्तालाई कानुनबारे जानकारी गराएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने अवगत पनि गराएको छ,” उनले भने।
आरोपबारे कतिपय प्राविधिक प्रमाणिकरण पनि गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, “हामीले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा हेरेका छौँ र अनुसन्धान जारी छ। जारी नै रहन्छ। अझै जाहेरी दिने म्याद लामै बाँकी भएकाले त्यसबेलासम्म अनुसन्धान कायमै रहन्छ।”
ज्ञवालीले एक वर्षसम्म पीडित भनिएकी व्यक्तिले जाहेरी दिनसक्ने भएकाले प्रहरीले जाहेरी आउँदैन भन्ने कल्पना नगरेको बताए। बीबीसी नेपाली सेवाबाट
११ राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीमा कोरोना पुष्टि
सिपिएल खेल्न गएका सन्दीपको कोरोना रिपोर्ट आयाे
नेपालमा थप पाँचजना काेराेना संक्रमितकाे मृत्यु
नेकपा माओवादी पनि ब्युँतियो, ३१ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटीको घोषणा
काेराेना संक्रमित कतै तरकारी त कतै पान बेच्दै !
काठमाडौंमा दश दिनमा ४५० कोरोना संक्रमित थपिए, नाकामा थप कडाइ आवश्यक
पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुहाेस् आजकाे राशिफल
काेराेना संक्रमित पाँच जनाकाे ज्यान गयाे
केन्द्रिय कमिटीको घोषणा नेकपा नेकपा माओवादी
कोरोना भाइरस फलफूलको व्यापार विराटनगर महानगरपालिका
महिलालाई उद्यमशील बनाउने लक्षसहित खाद्य उद्याेग सञ्चालन
काेराेना भ्याक्सिन वेज्ञानिक
कोरोनाको भ्याक्सिन निर्माणमा वैज्ञानिकहरुलाई राजनीतिक दबाब !
आजदेखि जोरबिजोर नम्बरका आधारमा गाडी चल्ने, यस्ता छन् सरकारका अरु तयारी
केपी शर्मा ओली प्रचण्ड
प्रचण्ड ओलीको गाईजात्रा !